Gite 2 abantu "La Barraque", St Felix Lauragais - I-Airbnb
Gite 2 abantu "La Barraque", St Felix Lauragais
Ifama sinombuki zindwendwe onguLucia
I-La Barraque, i-bucolic kunye ne-gourmet break kwilizwe lezinto ezininzi ... ICompostela, ipropathi inabela ngaphezulu kweehektare eziyi-2.5 kwithambeka lenduli. Ibekwe ngokufanelekileyo, ifama yethu yimizuzu engama-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, kumbindi weToulouse kunye naleyo yaseCarcassonne, imizuzu engama-20 ukusuka kwiCanal du Midi, imizuzu eli-15 ukusuka eLake St Féréol kunye nedolophu yaseRevel.
Indlu yethu encinci ilungele ukubaleka kwezothando okanye ikhefu emaphandleni! Ikwindlu yasefama yamatye, edibana nendlu yethu, kwaye inendawo yabucala yangaphandle. Isitiya esingabiyelwanga. Enye i-cottage kwindawo. Ukulima kwimarike yendalo; ukwenziwa kunye nokuthengiswa kweemveliso efama.
I-studio-cottage ye-25 m2 yabantu aba-2: igumbi lokuhlala lixhotyiswe ngekhitshi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela le-attic / WC. Ukufudumeza kombane
Izixhobo zangaphakathi nangaphandle:
-ITV, i-wifi, imicrowave, itoaster, isomisi seenwele
- i-barbecue, i-terrace enefenitshala yegadi.
Kunikiwe amaphepha / iitawuli xa uceliwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Félix-Lauragais